သမီးရှင် မိဘတိုင်း သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ကြပါစေ …. မုဒိန်းကျင့် လူသတ် အလောင်းဖျောက်ပြီး ပုဂံ ဘုရားဖူး သွားတယ် ဟုပြောကာ … – XB Media Myanmar
ဒီလိုပါ မုဒိန်းကျင့် လူသတ် အလောင်းဖျောက် တဲ့ အမူပါ … ယခု လက်ရှိ မိသွားပြီလို့ ဆိုပါတယ်
စာမေးပှဲ နောကျဆုံးနေ့မှာ သူငယျခငြျး ၃ ယောကျ အတူ လညျကွတာ … ရဆေနျကြှနျး ဘုရား အောကျခွနေားက သဈပငျအောကျမှာဖဲ လညျပငျညှဈ မုဒိနျးကငြျ့ပွီး နောကျကြောကို ဓားတဈခကြျ အရှေ့ကို အကွိမျရေ မြာစှား ထိညးသတျပွီး အလောငျးကို မွဈသာမွဈထဲ မြှောလိုကျတယျ ဆိုပါတယျ
သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူကို မုဒိန်းကျင့် သတ်ပြီးမှ သူတို့ နှစ်ယောက်က ငွေ/ဖုန်း/ဆိုင်ကယ် ယူပြီး ပုဂံ ကို ခပ်တည်တည်နဲ့ သွားလည်နေကြတာ …သတ်ခံရသူ ကောင်မလေး ဖခင် ဦးမောင်တို့က သူ့သမီး အချိန်တန် အိမ် ပြန်မလာလို့ သမီးသူငယ်ချင်း ဖုန်းဆက်မေးတော့ သူသူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် (မုဒိန်းကျင့် သတ်သူ နှစ်ယောက်) က ဆိုင်ကယ်တွေ/ဖုန်းတွေ ရောင်းပြီး ပုဂံ ဘုရားဖူး သွားတယ်
ဦးလေး သမီး ပါတယ်လို့ လိမ် ပြောတော့ … သတ်ခံရတဲ့ ကောင်မလေး ဖခင် ဦးမောင် တို့ကလည်း မိဘကို အသိမပေးဘဲ လျောက်လည်ရ ကောင်းလား ! ပြန်လာမှ ဆူ ဆုံးမ တော့မယ် ဆိုပြီး … အေးအေး ဆေးဆေး နေလိုက်တာ …
မန္တလေးမှာ ခင်မင် သိကျွမ်းတဲ့ မိတ်ဆွေတွေက … သူတို့နှစ်ယောက် တည်းနော့ ဦးမောင် သမီး ~ မပါဘူးလို့ မြင်တဲ့ အသိတချို့က ပြောမှ မန္တလေးမှာ ဖမ်းလိုက်တာ အဲခါမှ သူတို့ မုဒိန်းကျင့် လူသတ်ပြီး မြစ်သာမြစ် ထဲ မျှောလိုက်တယ် ဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်
လူတစ်ချို့ရဲ့ အသိစိတ် ကင်းမဲ့မူက ကြောက်စရာ အရမ်း ကောင်းတယ်
RIP ပါ ညီမလေး ChanMon ဖြစ်လေရာ ဘဝ ဒီလို အဖြစ်ဆိုးတွေ ကင်းဝေး ပါစေ ညီမလေး
လူသတ် မုဒိန်းကောင် ကတော့ ဆိုင်ကယ်ကို ရောင်းပြီး အေးအေးဆေးဆေး ဘုရားဖူး နေနိူင်တယ် ညီမလေးကို ရက်ရက်စက်စက် မုဒိန်းကျင့် သတ်ခဲ့တဲ့ Zan MinHtet ဆိုတဲ့သူကို မိပါပြီ ။
၁၀ရက်တောင် ပြည့်ခဲ့ပြီ ညီမလေးအလောင်းကို မြစ်ထဲ ရှာနေကြပြီ မြန်မြန်တွေ့ပါစေ ၊မနေ့က သစ်ခြောက် နားထိ အိမ်ကလူတွေရော ရှာကူကြတယ် ဒီနေ့တော့ ကလေးဝ ဖက် ရှာနေကြတယ် ပြန်တွေ့ပါစေ
အားလုံးအတွက် သင်ခန်းစာပါပဲ ခုထိမယုံနိုင်သေးပေမဲ့ လူသတ် မုဒိန်းကောင်က ဝန်ခံလိုက်ပြီ သမီးရှင် မိဘတိုင်း သင်ခန်းစာ ယူနိုင်ပြီး ကိုယ့်သားသမီးကိုယ် ပညာပေး ဆုံးမ နိုင်ကြပါစေ
စာမေးပှဲ နောကဆြုံးနေ့မှာ သူငယခြငွြး ၃ ယောကြ အတူ လညကြှတာ … ရဆနေကြွှနြး ဘုရား အောကခြှနေားက သဈပငအြောကမြှာဖဲ လညပြငညြှဈ မုဒိနြးကငွ့ပြှီး နောကကြွောကို ဓားတဈခကွြ အရှေ့ကို အကှိမရြေ မွာစှား ထိညးသတပြှီး အလောငြးကို မှဈသာမှဈထဲ မွှောလိုကတြယြ ဆိုပါတယြ
သူငယ်ချင်း ဖြစ်သူကို မုဒိန်းကျင့် သတ်ပြီးမှ သူတို့ နှစ်ယောက်က ငွေ/ဖုန်း/ဆိုင်ကယ် ယူပြီး ပုဂံ ကို ခပ်တည်တည်နဲ့ သွားလည်နေကြတာ …
သတ်ခံရသူ ကောင်မလေး ဖခင် ဦးမောင်တို့က သူ့သမီး အချိန်တန် အိမ် ပြန်မလာလို့ သမီးသူငယ်ချင်း ဖုန်းဆက်မေးတော့ သူ သူငယ်ချင်း နှစ်ယောက် (မုဒိန်းကျင့် သတ်သူ နှစ်ယောက်) က ဆိုင်ကယ်တွေ/ဖုန်းတွေ ရောင်းပြီး ပုဂံ ဘုရားဖူး သွားတယ်